Saamaynta xun ee wasakhda iftiinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Saamaynta xun ee wasakhaynta nalka
Badanaa waa laga hadlaa wasakhda iftiinka ama sawir-qaadis marka nalka macmalka ahi aad u tiro badan yahay oo meel walba yaal oo saamayn ku yeesho mugdiga caadiga ah ee habeenka la jecel yahay. Sidan oo kale, marka ay habeennimo dhacdo, ilo badan oo iftiin macmal ah ayaa qorraxda kala wareega xarumaha magaalooyinka iyo xitaa magaalooyinka yaryar.
Saynisyahanada qaarkood waxay qeexaan wasakheynta iftiin sida infrared, shucaaca iftiinka la arki karo ee banaanka ama banaanka loo sii daayo, taas oo ay ugu wacan tahay jiheyntiisa, xoogeeda iyo tayadeeda, waxay saameyn aan dhib laheyn ku yeelan kartaa dadka, dhulka, ama nidaamka deegaanka.
La wasakheynta iftiin waa nooc ka mid ah wasakheynta oo si dhif ah loo soo saaro sababtoo ah a priori ma ahan mid waxyeello weyn u leh caafimaadka, marka la barbar dhigo wasakheynta caadiga ah ee qashinka, qiiqa magaalooyinka, bullaacadaha, iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, wasakheynta iftiin waxay cawaaqib ku leedahay noolaha si fududna waa loo yareyn karaa.
Laga soo bilaabo 1830, kuwii ka masuulka ahaa laydhkii Paris waxay shideen hal laambad wadada labadii habeenba dayax cad. Hawlgal la xiriira welwelka keydinta oo aan wax badan la lahayn wasakheynta iftiin, taas oo weli ahayd mid aad u qiimo yar. Dhawaanahan, Ururka Madowga Cirka ee Mareykanka, oo tan iyo 1988 ka dhigay ifafaalahaan la yaqaan, kaas oo lagu kordhiyay wax si dhab ah waxyeello u leh, oo si fiican u wada muuqda. Runtii, qodobbada iftiiminaya ma joojinayaan tarmo.
In 1992, UNESCO Waxay ku qorneyd bayaankeeda xuquuqda jiilalka soo socda, qayb gaar ah oo ku saabsan xuquuqda dhowrista cirka iyo daahirnimadiisa. Sannadkii 2002, Shirweynihii Venice iyo Lucerne waxay soo saareen baaqyo loo dirayo dawladaha adduunka si loo ilaaliyo cirka habeenka. Xilligan, ka UN waxay ku talo jirtaa inay u tixgeliso cirka xiddigta sida dhaxalka guud ee aadanaha.
Aqoonso wasakhaynta nalka
La wasakheynta iftiin Waxaa si gaar ah loo arkaa marka cirka ay qariyaan daruuro hoose, maaddaama kuwani ay muujinayaan oo ay u kala firdhinayaan iftiin maylal. Sidan oo kale, cirku wuxuu u muuqdaa mugdi-casaan madow. Tani waxay si gaar ah u muuqataa dadka badan. Caadi ahaan, cirku waa inuu ahaadaa mid gebi ahaanba madow, ama dayaxa un iftiimiyaa. Marka cimiladu nadiif tahay, oo magaalada ka baxsan, ayaa jannada Aad ayey uga madowdahay magaalada, joogitaanka magaalo weynna waxaa si fudud lagu garan karaa isbeddelka cirka cirka oo isu beddela midab casaan ah oo iftiima.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Tababar » Saamaynta xun ee wasakhaynta nalka
Shiinaha wuxuu soo jeedinayaa $ 50 tirilyan oo shabakad tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Isbedelka Cimilada, caqabadda weyn ee aadanaha